ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး | Page 12 | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
16.3.2018 | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
က​လေး​မွေးပြီး ၂ရက်​​မြောက်​​နေ့နဲ့ ၅ရက်​​မြောက်​​နေ့တို့မှာ က​လေး​တို့​မေမေ​​တွေ နို့တင်း​လေ့ရှိတတ်​ပါတယ်​။ ဒီလိုဖြစ်​ရတာဟာ က​လေးကို နိ...
27.2.2018 | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
25.2.2018 | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ချိန်​ ဗိုက်​နာဗိုက်​​အောင့်​တာဟာ စိုးရိမ်​ရသလား။
23.2.2018 | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
16.2.2018 | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
ခန့်​မှန်းမွေးရက်​ထက်​​ကျော်​လွန်​လာပြီး ဗိုက်​မနာ​သေးတဲ့အခါ စိုးရိမ်​ပူပန်​စိတ်​​တွေ ဖြစ်​​ပေါ်လာတတ်​ပါတယ်​။ တစ်​ရက်​နှစ...
ကိုယ်ဝန်ပျက်ပြီးနောက် ကလေး ဘယ်အချိန် ပြန်ရနိုင်သလဲ?
15.2.2018 | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
ကိုယ်ဝန်ပျက်ပြီးနောက် ရက်အတော်ကြာ ရာသီသွေး မပေါ်တတ်ပေမယ့် သားဥကြွေတဲ့အတွက် သန္ဓေ တည်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ချက်ချင်း ကိုယ်ဝန်...
5.2.2018 | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအနေနဲ့ ရေမြွှာဘယ်အချိန်မှာပေါက်လဲ၊ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ၊ ဘာလုပ်ရမလဲစတဲ့အကြောင်းတွေကို သိချင်ကြမှာပါပဲ။
ကလေးမွေးရင်း အိမ်သာတက်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
4.2.2018 | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
ကလေး မွေးကာနီးအချိန်မှာ မကြာခဏ ထပြီး ဆီးသွားချင်တတ်ကြပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကတော့ ဆီးသွားချင်ရင် ထပေါက်ဖို့ အားပေးပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုေ...